अर्जेन्टिनाका समर्थक दीपकराज गिरीको 'ब्राजिल र मेक्सिको'बीचको खेलबारे आयो यस्तो कडा प्रतिकृया !
अर्जेन्टिनाका समर्थक दीपकराज गिरीको ‘ब्राजिल र मेक्सिको’बीचको खेलबारे आयो यस्तो कडा प्रतिकृया !
काठमाडौँ । यतिबेला विश्वभर विश्वकप फुटबलको रौनकता चरम उत्कर्षमा पुगेको अवस्था रेहको छ। यसपटक आशा गरिएका र विश्वकपका पूर्वविजेता टोलीहरु नै एकपछि अर्को गर्दै नकाउट चरणबाटै घर फर्किन थालेपछि रसिया विश्वकपमा सनसनीनै मच्चिएको छ। सबैमा एउटै जिज्ञासा छ आखिर कसले लैजाला यस पटकको विश्वकपको उपाधि।
यसरी लगातार पूर्व विजेताहरु नकाउट चरणबाटै बाहिरिने क्रम आज रोकिएला या नरोकिएला त्यो हेर्न भने अझै करिव एक घण्टा मात्र बाँकी छ। आज पाँच पटकको विश्व विजेता टोली ब्राजिलले मेक्सिकोको समाना गर्दैछ। नेपालमा अर्जेन्टिनापछि दास्रो अत्याधिक समर्थक भएको फुटबल टोली ब्राजिल हो।
यसैबीच अर्जेन्टिनाका समर्थक रहेका कलाकार दीपकराज गिरीले आज हुने ब्राजिल र मेक्सिकोबीचको खेलबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। गिरीले आफ्नो प्रिय टिम अर्जेन्टिना हार्यो भन्दैमा ब्राजिलले पनि हारोस नभन्ने सोच आफूमा नआएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर ब्राजिललाई जितको लागि शुभकामाना दिएका छन्।
गिरी लेख्छन् -जो मान्छे कमजोर छ त्यो आफू कसरी जित्ने सोच्दैन अर्कोलाइ कसरी हराउने भनेर सोच्छ
आफ्नो प्रिय टिम अर्जेन्टिना हार्यो भन्दैमा ब्राजिलले पनि हारोस भन्दिन , जितोस् नै भन्छू!!!
ब्राजिल र मेक्सिकोबीच हुने आजको खेल राति पौने आठ बजेबाट सुरु हुनेछ।
प्रकाशित : सोमबार, असार १८, २०७५१८:४९
उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा गर्दै पनि नेयामारको विश्वभर आलोचना ! ब्राजिलको पत्रिकाले समेत लेख्यो यस्तो…
बार्सिलोनाले रियललाई शानदार तरिकाबाट हराउनुको तीन कारण !
अर्जेन्टिनी स्टार मेस्सीले खोले रिवनको रहस्य: उनको कुरा सुनेर पत्रकार नै बने भावुक [ भिडियो ]
‘समय आएपछि मात्रै मेस्सीको भविष्यबारे थाहा हुनेछ’
आजको खेल जिते नेपाल विश्व कप छनोट किर्केटमा यस्तो कठिन समूहमा पर्ने (यस्तो छ टिमको सूची )